.“Fan တစ်ဦးရေးဆွဲပေးထားတဲ့ ရေဝတီကာရိုက်ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေမိတယ်ဆိုတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း”. – Askstyle
.“Fan တစ်ဦးရေးဆွဲပေးထားတဲ့ ရေဝတီကာရိုက်ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေမိတယ်ဆိုတဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း”.
အသံဝဲဝဲနဲ႕ ေျပာဆိုတတ္ျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းစႏၵာလွထြန္းကို ပရိသတ္ေတြနဲ႕ အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႕မလိုေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။ နန္းစႏၵာလွထြန္းကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲတိုင္းရဲ႕ က်ရာဇာတ္ရုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေတြေၾကာင့္ အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္လာတဲ့သူတစ္ဦးပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ အမူအရာေလးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့သူပဲျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာေတာ့ သူမသရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေလး ျပန္လည္ျပသေနတာမို႕ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ ဗီဒီယုိဖိုင္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕မွာေတာ့ နန္းစႏၵာလွထြန္းက”Fan art ေလးေတြ႕လို႔ ခ်စ္လို႔ အဲ့ပုံေလး ေရဝတီ( ဆြဲေပးတဲ့သူေလး အလင္းျပအုံးေနာ္”လို႕ဆိုျပီး Fan တစ္ဦးဆြဲေပးထားတဲ့ ေရဝတီကာရုိက္တာပုံရိပ္ေလးကို သေဘာက်မဆုံးျဖစ္ရင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပဥၥလက္ရြာဇာတ္လမ္းတြဲထဲက ကာရိုက္တာပုံရိပ္ေလး ဆြဲေပးထားတာေလးကို သေဘာက်မဆုံးျဖစ္ေနတာမို႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ျပီးမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံးသာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႕ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source…..Nann Sandar Hla Htun’s Facebook
အသံဝဲဝဲနဲ့ ပြောဆိုတတ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းစန္ဒာလှထွန်းကို ပရိသတ်တွေနဲ့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ နန်းစန္ဒာလှထွန်းကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်လာတဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ သူမသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ပြန်လည်ပြသနေတာမို့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နန်းစန္ဒာလှထွန်းက”Fan art လေးတွေ့လို့ ချစ်လို့ အဲ့ပုံလေး ရေဝတီ( ဆွဲပေးတဲ့သူလေး အလင်းပြအုံးနော်”လို့ဆိုပြီး Fan တစ်ဦးဆွဲပေးထားတဲ့ ရေဝတီကာရိုက်တာပုံရိပ်လေးကို သဘောကျမဆုံးဖြစ်ရင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပဉ္စလက်ရွာဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ကာရိုက်တာပုံရိပ်လေး ဆွဲပေးထားတာလေးကို သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေတာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။